ထိုင်ပေမြို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်သီးသန့်ကဏ္ဍမြန်မာဘာသာ-2021 ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားစိတ်နှလုံး -ဆီးနှင်းမရှိသောဆောင်းရာသီ—ဂမ်ဘီယာ စာရေးသူ ：ဂမ်ဘီယာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသား သစ် Ali/ကျန်းလိဝေ
ဆီးနှင်းမရှိသောဆောင်းရာသီ—ဂမ်ဘီယာ စာရေးသူ ：ဂမ်ဘီယာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသား သစ် Ali/ကျန်းလိဝေ
ဂမ်ဘီယာအကြောင်းပြောရလျှင် လှပသောကမ်းရိုးတန်း၊ကျော်ကြားသောဂမ်ဘီယာမြစ်၊ ရောင်စုံငှက်များနှင့်စိတ်အားထက်သန်သောသူများကိုစဉ်းစားရမည်။အာဖရိကရှိအသေး ငယ်ဆုံးသောနိုင်ငံကို「အာဖရိက၏ပြုံးနေသည့်ကမ်းခြေ」ဟုခေါ်သည်။ဂမ်ဘီယာတွင် မွတ်စလင်95%ခန့်နှင့်ခရစ်ယာန်4%ကျော်သည် ဆောင်းရာသီပွဲတော်တွင်အားလုံး အတူ တကွ မခွဲခြားဘဲ ကျင်းပကြသည်။
ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်မိသားစုအားလုံးသည်မွတ်စလင်ဖြစ်သော်လည်းငါတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်နီး ချင်းများဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများပြီးဆုံးပြီးနောက် ငါတို့မကြာခဏလည်ပတ်ကြပြီးအတူတကွပျော်ရွှင်စွာစားသုံးကြသည်(စားပွဲပေါ်မှာဝက် သားမတွေ့ရပါ)။ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်များအတွင်းလမ်းများပေါ်တွင်တနေကုန်နီးပါး အသံကျယ်သောတေးသံဖွင့်ထားသည့်အသံကိုကြားနိုင်သည်။ကလေးများမုန့်ဖိုး(သို့)လက် ဆောင်တွေယူဖို့လာကြသည်၊ အာရှနှစ်သစ်ကူး(သို့)အနောက်တိုင်းရဲ့ဟယ်လိုဝင်းကဲ့သို့ စည်ကားသည်၊ကျွန်ုပ်ကလေးဘဝတုန်းကလည်းနှစ်သက်သည်၊တစ်ခါတစ်ရံအပေါင်းအ ဖော်များနှင့်အတူသီဆိုကခုန်သည်၊ကျွန်ုပ်အားလက်ဆောင်ပေးသောလူကြီးများအားကျေး ဇူးတင်ပါသည်！
ဆောင်းရာသီ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာဂမ်ဘီယာရှိခရစ်ယာန်များဖြစ်သော်လည်းအခြားသူ များလည်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများဖြင့်အတူတကွကျင်းပကြသည်။ 10、11လတွင်ဂမ် ဘီယာအနုပညာရှင်များသည်မီးအိမ်ပွဲတော်နှင့်မျက်နှာဖုံးလှည့်လည်ပွဲတော်အတွက်အလွန် လှပသောမျက်နှာဖုံးများပြင်ဆင်ကြသည်၊မတူညီသည့်ဖန်တီးမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းများသူတို့၏အနုပညာအရည်အသွေးကိုပြရန်စုဝေးကြသည်၊အချို့သည်မီးအိမ်ပြုလုပ်ရာတွင်အထူးပြုသည်၊ မီးအိမ်သည်သင်္ဘောပုံစံဖြစ်သည်၊ဒေသခံဘာသာစကားဖြင့် "Fanaal"ဟု ခေါ်ကြသည်။ "Fanaal"သည်များသောအားဖြင့်နာရီပေါင်းရာနှင့်ချီပြီးမရေမတွက်နိုင်သော လူအင်အားဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊သစ်သား၊စက္ကူနှင့်မီးများစွာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ခရစ္စမတ်၏ ဂုဏ်အသရေကိုကိုယ်စားပြုသောညအချိန်သည်တောက်ပနေသည်။
အချို့သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည်မျက်နှာဖုံးလှည့်လည်ပွဲအတွက်ဝတ်စုံများအထူးပြုလုပ်ကြသည်၊ဝတ်စုံများကို 「အမဲလိုက်ခြင်း (hunting)」ဟုခေါ်ကြသည်၊များသောအားဖြင့် အိတ်များ၊ ပိုက်ကွန်နှင့်တိရစ္ဆာန်သားရေတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးဝတ်စုံသည်တစ်ကိုယ်လုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်၊တိရိစ္ဆာန်ပုံသဏ္ဍာန်သာဖော်ပြထားသည့်ဦးသျှောင်၊တောရိုင်းဦးသျှောင် သည်လှည့်လည်သည့်ပွဲ၌အနှစ်သာရဖြစ်ပြီးလှည့်လည်ပွဲ၏အကောင်းဆုံးပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုအနိုင်ရရန်အရေးပါသောသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်！
အရောင်စုံ「အမဲလိုက်」လှည့်လည်ပွဲမှာစည်းကားလှသောဗုံသံများနှင့်အတူလမ်းပေါ်လှည့် လည်သည်။ညဉ့်နက်ချိန်တွင်လှပသောFanaals မီးအိမ်သည်လင်းလက်တောက်ပလျှက် ဆောင်းရာသီရဲ့လမ်းများပေါ်၌မီးများထွန်းလင်းတောက်ပနေပြီးဂမ်ဘီယာပြည်သူလူထုကိုအဆုံးမဲ့ရွှင်လန်းစေပါသည်၊တစ်နှစ်၏အဆုံးနှင့်နှစ်သစ်၏အစပြယုဂ်ဖြစ်သည်၊ဤသည်မှာ 「ပြုံးနေသည့်ကမ်းခြေ」ဂမ်ဘီယာသို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်!
2. ဦးသျှောင်ကိုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ခေါင်းနမူနာဖြင့်ပြုလုပ်
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2021-01-08 15:20